Dharka dumarka ee la isticmaalo - hissenglobal.com
Gacanta Labaad Dharka Dumarka
Dharka dumarka ee la isticmaalay ee Hissen Global ayaa ah shayga ugu tartanka badan qaybta. Hissen Global dharka dumarka ee la isticmaalo ayaa leh 3 faa'iidooyin: tayada joogtada ah, mugga wax soo saarka weyn iyo boqolkiiba sare ee dharka dumarka calaamadeysan. Dharka dumarka ee la isticmaalay waxaa ka mid ah funaanadaha dumarka ee la isticmaalay, dharka xariirta ee la isticmaalay, dharka suufka ah, dharka bustier-ka ee la isticmaalay, iyo in ka badan 50 qaybood. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiyaha dharka dumarka la isticmaalay, markaa fadlan nala soo xiriir, Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa booqashadaada warshadeena. Ku soo dhawoow wada shaqayn
Haddii aad rabto inaad iibsato dharka dumarka ee tayada leh, xasuusnoow inaad noo soo dirto weydiin
La xidhiidh khabiirka dharka la isticmaalay
Ladies Hoodies loo isticmaalo
Dharka ciyaaraha ee la isticmaalay
Dharka dumarka oo badan >>
Waa maxay sababta ay u dooratay dharka dumarka ee la isticmaalo ee Hissen Global
Tayo joogto ah waa faa'iidada ugu weyn ee Hissen Global. Hissen Global waxa ay muhiimad weyn siinaysaa maaraynta tayada waxa uuna sameeyay nidaam maarayn tayo leh oo dhamaystiran oo loogu talagalay dharka gacan labaadka ah. Hissen Global ayaa leh kormeeraha tayada ee khad kasta oo kala-soocidda, yaa mas'uul ka ah hubinta tayada dharka ay kala soocaan soosaarayaasha, soo saarista dharka godadka leh, wasakhaysan, caaryada iyo isticmaalka xad dhaafka ah. Boqolkiiba dharka dumarka gacanta labaad ee A-grade waxa la dammaanad qaaday in uu ka badan yahay 98%.
Shiinaha ayaa leh tirada dumarka ugu badan adduunka, tiradan dadku waa 688.44 million (Isha xogta OECD), Way ka badan tahay laba jeer tirada guud ee dadweynaha Maraykanka. Marka heerka nololeed ee dadka Shiinuhu uu soo fiicnaado oo uu soo fiicnaado, dumarka Shiinaha ayaa aad iyo aad u dhadhan badan oo moodada leh, waxay jecel yihiin inay xidhaan Kuuriya Japan Yurub iyo American qaabka, isla mar ahaantaana waxay leeyihiin shuruudo sare oo sarreeya oo tayada leh, Dharka labaad ee Hissen Global ee dharka dumarka waxaa laga soo ururiyaa magaalooyinka ugu horumarsan ee Shiinaha, haweenka magaalooyinkaas waxay leeyihiin shuruudo sare oo tayo leh.
Hissen Global ayaa leh in ka badan 50 qaybood oo ah dharka dumarka ee gacan labaadka ah sida funaanadaha gaaban ee haweenka gacanta labaad, dharka xariirta dumarka, jiinis-gacan labaad dumarka, Surwaalka capri ee dumarka, gacan labaad surwaalka suufka dumarka, dharka xariirta ee dumarka gacanta labaad, goonnada haweenka ee gacanta labaad, Shay kasta si fiican ayaa loo kaydiyay oo kala-soociddayada faahfaahsan waxay kala duwan tahay liiskaaga xirxiran iyo weelkaaga ka dhig mid faa'iido badan leh
Iyada oo kumanaan kun oo konteenar ah loo soo dhoofiyo dibadda sannad kasta, kooxda maraakiibta ee Hissen Global waxay leeyihiin khibrad badan oo ku saabsan dhoofinta waxayna ku siin doonaan xalalka ugu fiican ee maraakiibta, xitaa haddii aadan qorsheynin inaad ka soo qaadato dharka la isticmaalo ee Hissen Global weli, asxaabteena maraakiibta ayaa sameyn doona ku siin xal maraakiibta bilaashka ah.
Waxaan leenahay a dhamaystiran habka adeegga iibka ka dib, laga bilaabo habaynta astaanta, kala-soocidda alaabta, baadhista tayada, miisaamidda, baakaynta iyo rarista,, hawl kastaa waxay soo saari doontaa warbixin oo kuu soo diri doonta, waxaanu sidoo kale ku siin karnaa kala soocida si toos ah, kormeer tayo leh oo toos ah, iyo wixi la mida. Waxaan ku dadaali doonaa sidii aan meesha uga saari lahayn welwelka macmiilka.
Ma rabtaa inaad si toos ah u aragto xakamaynta tayada?
Raadadka weelashayadu waxay leeyihiin 5-10 sano oo waayo-aragnimo ah. Koonteenarada xagaaga, kuwa xamuulka qaada weelkeena waxay ku raran karaan 28.6 tan, kabahana waxay ku raran karaan wax ka badan 25 tan oo macnaheedu yahay in ka badan 1000 baakidh, tiradani aad ayey uga badan tahay kuwa dhiggeena ah oo awood u leh ku badbaadi in ka badan 10% kharashka xamuulka badda.
Dhoofinta dharka labaad ee ugu sareysa
Sida dhoofiyaha sare ee la isticmaalo, Hissen Global waxa uu qabsaday faa'iidooyin badan oo alaab-qeybiyeyaasha kale aysan haysan. Summadayada Hissen Global ayaa lagu calaamadeeyay dalal badan oo Afrikaan ah, dharkayaga la isticmaalo ayaa lagu iibiyaa in ka badan Dalalka 60 iyo ku dhowaad 100 milyan oo qof Waxaan xidhnay dharkayagii la isticmaalay ee uu soocay Hissen Global, waxaanu ku leenahay 2 warshadood oo kala sooca iyo in ka badan 400 oo shaqaale ah oo jooga magaalooyinka ugu horumarsan Shiinaha, waxaanan leenahay shaqaale iibiye xirfad leh oo ku hadla Ingiriis, Faransiis iyo Isbaanish. Hadafkayagu waa inaan noqono shirkadda ugu weyn ee dharka gacanta labaad ee adduunka iyo inaan ka dhigno dharkayaga gacanta labaad oo ay heli karaan dad badan oo Afrika ah.
"Tayada dharka labiska ee Hissen Global waa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan dharka xariirta dumarka ee gacan labaadka ah, heerka ciladuhu aad buu u hooseeyaa, 5 jeer ayaanu wada shaqeynay hadda, tayaduna aad bay u xasilloon tahay, anigu ma niyad jabin. ”
"Waxaan la dhacay tayada gacan labaad ee haweenka t shi'r't gaaban by Hissen Global, ma jiraan wax dalool ah, ma wasakh ah, ma caariyaysi, ma jiraan arrimo tayada sii luminaya"
"Dharka labaad ee Hissen Global ee dharka dumarka waa mid aad u kulul oo qiimo fiican u leh lacagta, sumadda Hissen Global waxay saameyn weyn ku leedahay dalkeena waxayna jecel yihiin kabaha astaanta"